Kooxada Khaatuma-xun Geed ma Qariyo – Rasaasa News
Maxaa keenay inay ay aflabadii dhawaaqaan kooxda khaatumo xun ee uu hogaamiyo Maxamed Cumer Cismaan kadib Shirwaynihii 30aad ee uu yeeshay ururka Midowga Jabhadda Xoraynta S/galbeed.
Kooxdan ayaa maalamahan ku mashquulsanayd in ay meelaha ay dadka waxtarka Bulshada u leh ee Dhagarahooda fahmaya ku caayaan, ayaa ku lahaa waxaa labanaystay dhiigayaga ilaa heer ay gaadheen inay udigaan xubnahooda aduunka ku firidhsan, taasoo muujinaysa Habnugaylka kooxda Khaatumo Xun.
Miyayna ahayn koodani tii bilowday dagaalka ay ku dhinteen boqolaalka wiil ee mid waliba reerkooda uga yimid in uu la dagaalamo gumaysiga dhulkooda haysta taasoo sababtay in ay iska horkeenaan dadkii halganka kuwada jiray kadib markii ninka masuulka ka ah kooxda khaatumo xun uu Qandaraas ka qaatay kuwo aan unaxayn dadkan
iyo dalkooda midna taasoo dhalisay waxa hada uu ka qaylinayo.
Waxaba kasii daran sow ma ahayn ninkii laga waayay wax nabada in uu hadda yidhaahdo waxaa la banaysanayaa dhiigayaga waa hashii la yidhi iyadaa geela cunta haddana cabaada dhagar qabe intuu waxaad aragtay dhigay hadana calaacalaya markuu arkay in lagula xisaabtami wuxuu dhigay ee, uu ama shacabka ugaystay ama uu Ururadda kale
ugaystay ama uu ONLF dhexdeeda ka gaystay ee Dil Qarsoon ahaa iyo mid Badheedhaba intaba sidii Jamaal DHeere.
Kooxdan oo aad moodo inay gaadhay meeshii ay ku burburi lahayd ayaa labadii sanee ugu dambaysayba gobalkaas ka waday Xasuuq ka dhana Shacabka Dagan dhulkaas, Xasuuqaas ayaa ka dhacay inta badan gobaladda uu kakoobanyahay deegaanku gar ahaan Sida Gobalka Nogbeed,Godey,Qorahay,Jigjiga,Doolo iyo Dhagaxbuur.
Waxaan isku dayaynaa inshaa Alaah in aan idiin soo qorno Xasuuqaas iyo meelihii uu ka dhacay iyo Dadkii lagu laayay ee aan waxba galabsan iyo cida ka dambaysay oo markii ay dilaan shacab aan waxba galabsan yidhaa waxaan laynay ciidanka gumaysiga sida ninka la yidhaa Sulub Cabdi Axmed oo intuu Gudhis Ku dilay 45 nin oo reer Amaadina yidhi waxaan dilnay 140 Tigree ah, waxaan kaloon soo bandhigi doonaa raga waxan ka dambeeya iyo taariikhdooda iyo cadaymo aan uhayno xidhiidhka iyaga iyo gumaysiga ka dhexeeya.